I-Wild Pines Waterfront 3 - I-Airbnb
I-Wild Pines Waterfront 3
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Craig, Luka+Willow
U-Craig, Luka+Willow Ungumbungazi ovelele
Indlu yezivakashi esanda kulungiswa enekamelo lokulala elilodwa e-East Jindwagenne. Indawo engasechibini ngokuphelele engaphephile ukubukeka kwechibi kuyindawo yokuphonsa amatshe ukusuka emngceleni wamanzi. Kutholakala ngemizuzu engu-7 uma uhamba ngemoto ukuya enkabeni yedolobha futhi cishe imizuzu engu-30 uma uhamba ngemoto ukuya e-Tredbo nase-Perisher. Indawo yokuhlala ekahle kakhulu unyaka wonke.
Kuqukethe ngokugcwele izingubo zokugqoka ezihlanganyelwayo. Iyunithi ingeyesimanjemanje futhi ithokomele futhi ifanele imibhangqwana, abangane kanye/noma imindeni emincane. Indawo enhle yokutshuza eqhweni noma yokuvakasha ngasechibini. Instagram @ wildpinesguesthouse
I-guesthouse ivulekile uhlelo olunekamelo lokulala elihlukile negumbi lokugezela elinompheme wangaphandle obheke ichibi elihle nokubukeka kwezintaba. Kunombhede omkhulu nombhede owusofa futhi indawo ingahlalisa izivakashi ezingu-2-4. Sine-wifi kanye ne-smart tv kuhlinzekwa kanye nawo wonke amashidi namathawula, itiye lamahhala kanye nekhofi kanye nama-condiments. Izingubo zokugqoka ezihlanganyelwayo zivuliwe kanye nezindawo zokosa. Indawo yokupaka izimoto iyatholakala.
I-guesthouse iyi-1 kwezingu-5 ngakho uzobona ezinye izivakashi nathi ziza futhi sihambe futhi sizwe umsindo ngezikhathi ezithile njenganoma iyiphi enye iyunithi eyinkimbinkimbi
4.84 · 144 okushiwo abanye
Sitholakala emaminithini angu-5 ukusuka enkabeni yedolobha, yimoto emfushane kuphela eya kumaphabhu, izindawo zokudlela, izitolo, i-cinema, ipaki kanye nokuqashwa kwe-ski. Siphinde sibe seduze ne-Siesta Villa okuyindawo yokuphuza/yokudlela enhle kakhulu emnyango wethu. Iningi lezinyawo ezinhle namathrekhi amabhayisikili asezintabeni azungeze indlu yethu
Ibungazwe ngu-Craig, Luka+Willow
Siyakujabulela ukuba nokuxhumana okuncane noma okuningi nezivakashi zethu njengokuthanda kwakho. Sikhona ukuze siphendule imibuzo noma sinikeze iseluleko uma kungenzeka. Uma singekho esayithini siyatholakala ngomyalezo noma ngocingo
UCraig, Luka+Willow Ungumbungazi ovelele